Chips-ka 'M1X' waxaa lagu dhex dari doonaa barnaamijka cusub ee 'MacBook Pro | Waxaan ka socdaa mac
Waqtigan xaadirka ah ee filimka waxaan shaki ku jirin in Apple laga yaabo inuu ka fekerayo inuu soo saaro processor-ka hagaajinaya moodooyinka soo socda ee MacBook Pro, xaaladdan, M1X waxaa loo yaqaan bedelka M1 hadda.
Waxaa macquul ah in barnaamijka cusub ee 'MacBook Pro' oo dib u qaabeyn lagu soo kordhiyay processor-ka sidoo kalena laga baabi'iyo astaanta Apple xagga hore, taas oo ah, inay gebi ahaanba wada siman yihiin, iyadoo aan lahayn astaanta Apple meel kasta. Xanta qaar ayaa tilmaamaya taas kooxahan 14 iyo 16 inji siday u kala horreeyaan waxay lahaan doonaan processor-kan la hagaajiyay.
Horaantii todobaadkan, macalinkii caanka ahaa ee caanka ahaa Mark Gurman ayaa u sharaxay Bloomberg in Moodooyinka 14-inch iyo 16-inch ee soo socda ee MacBook Pro waxay lahaan lahaayeen jab cusub oo hagaajinaya awoodda iyo waxtarka hadda jira ee 'MacBook Pros'. Xaaladdan oo kale waxaan dhahay waxay ku dari doonaan 10-core CPU oo leh sideed waxqabad sare leh iyo 2 runti wax ku ool ah xagga isticmaalka. Kooxahani waxay ku dari doonaan GPU is waafajin kara ilaa 64GB xusuusta iyo dekedo dheeri ah oo Thunderbolt ah.
Waxaas oo dhan hadda waxaa lagu daray wararkii dhawaanta ee ay ku daabaceen 9to5Mac isagoo tixraacaya "ilo rikoodh wanaagsan xan leh" sidaa darteed shaki la'aan waan ka fikiri karnaa taas Apple waxay sii deyn doontaa processor-ka la hagaajiyay sannadkan laakiin uguma yeeri doono M2Tan waxaa la sii deyn doonaa sanadka soo socda iyadoo laga sii wanaajin doono M1X oo la sii deyn karo dabayaaqada sanadkan. Shaki kuma jiro inaan dhaqdhaqaaq sameyno marka la eego processor-yada iyo in Apple ay dib u cusbooneysiin karto M1-da hadda jirta oo xitaa ku jirta jiilkii ugu dambeeyay iPad Pro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Chips M1X ayaa lagu dhex dari doonaa barnaamijka cusub ee 'MacBook Pro'
Antonio García oo ahaa shaqaalihii hore ee Apple ayaa ka hadlaya xil ka qaadistiisa